"Ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra; ary ny habakabaka manambara ny asan'ny tànany."
Mba tazanao ve irony kintana an-danitra avo irony ? Andriamanitra no nahary azy, ary Azy ireny. Fantany ny isan'ireny kintana ireny ary omeny anarana avokoa izy rehetra satria lehibe Izy ary tsy misy fetra ny fahalalàny.
Teraka Ilay Andriamanitra Mpamonjy. Fifaliana lehibe no tany an-danitra. Tonga teto amin'izao tontolo izao Jesosy Kristy, Zanak'Andriamanitra mba hamonjy izay rehetra mino azy ho afaka amin'ny fahotana ary hanokatra ho azy ireo ny varavaran'ny lanitra. Tanteraka ilay teny fampanantenana nataon'Andriamanitra. Izy no ilay làlana mitondra mankany amin'ny Rain'ny fahazavàna. Izy no fahamarinana ary fiainana. Te-hino izany ve ianao izao anio izao ka ho tonga zanaky ny mazava koa?
Misaora an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra noho izany asany mahafinaritra izany!